Voyager ၏ 60% ရှယ်ယာစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုသည် crypto စတော့ရှယ်ယာများအတွက်အနီရောင်ပင်လယ်ကိုဦးတည်စေသည်။ - Token Myanmar
Voyager ၏ 60% ရှယ်ယာစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုသည် crypto စတော့ရှယ်ယာများအတွက်အနီရောင်ပင်လယ်ကိုဦးတည်စေသည်။
၎င်း၏ Three Arrows Capital (3AC) ထိတွေ့မှုကိုထုတ်ဖော်ပြီးနောက် Voyager Digital ၏ (VYGVF) ရှယ်ယာစျေးနှုန်း၏ 60% ကျဆင်းမှုသည် crypto လုပ်ငန်းစတော့ရှယ်ယာများတွင် ထပ်လောင်းကျဆင်းမှုနှင့်အတူ လိုက်ပါသွားပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုမြင်ကွင်းမှဒေတာများအရ၊ VYGVF သည် ဇွန်လ 22 ရက်နေ့တွင်ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနာရီများအတွင်း 60% ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး ထိုနေ့အတွက် 50.84% ​​ကျဆင်းသွားသည်ကို မှတ်သားရန် $0.5998 ဖြင့် မပိတ်မီတွင် ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
Voyager Digital မှ ထုတ်ဖော်လိုက်သော စူးရှသော ကျဆင်းမှု ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Three Arrows Capital ကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ချေရှိသည်။ (3AC) သည် ကုမ္ပဏီအား 15,250 Bitcoin (BTC) နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 350 အကြွေစေ့ (USDC) စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ သန်း ၆၆၀ ခန့် တန်ကြေးရှိသည်။
Voyager သည် 3AC အား သောကြာနေ့ (ဇွန် ၂၄ ရက်) အထိ ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း ပေးချေရန် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး နောက်တနေ့ (ဇွန် ၂၇ ရက်) အထိ ချေးငွေမထုတ်မီ ငွေပမာဏကို အပြည့်ပေးချေရန် ပုံသေသတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် 3AC အား တရားဥပဒေအရ အရေးယူရန် ရှေ့နေများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ အစုစပ်ရန်ပုံငွေမှ ၎င်း၏အကြွေးကို ပြန်မဆပ်နိုင်ပါက၊
Alameda သုတေသန Voyager ၏ လက်ရှိငွေဖြစ်လွယ်မှုပြဿနာများကို ကာမိစေရန် USDC သန်း 200 လှည့်ပတ်ချေးငွေနှင့် 15,000 BTC လှည့်ပတ်ချေးငွေကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှာလည်း ရှိတယ်။ တင်းကျပ် ၎င်း၏ 24 နာရီ ငွေထုတ်ကန့်သတ်ချက်သည် ယခုအပတ်တွင် $25,000 မှ $10,000 ဖြစ်သည်။
“စင်တီဂရိတ်မှာ $10,000 ထက် ပိုကောင်းတယ်” မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုဖြင့် r/CelciusNetwork ခွဲ Reddit ရှိ Redditor AdLongjumping5010။
အခြားသော crypto နှင့်ဆက်စပ်သောစတော့ရှယ်ယာများဆက်လက်ခံစားနေကြရသည်။ Coinbase စတော့ရှယ်ယာ (COIN) သည် $51.91 သို့ 9.71% ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး Michael Saylor ဦးဆောင်သော BTC မှ ကြီးမားသောထိတွေ့မှု MicroStrategy (MSTR) သည် ၎င်း၏ရှယ်ယာများသည် 4.50% သို့ $170.91 သို့ ကျဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။
$ 14 ဘီလီယံရှိ Coinbase သည်အများပြည်သူစျေးကွက်တွင်ကျွန်တော်မြင်ဖူးသမျှအမိုက်ဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
2008 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ၎င်း၏ ငွေသားလက်ကျန်အထက် 50% တွင် Apple ကသာ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
boomer မှားယွင်းသောစျေးနှုန်းသည် ကျွန်ုပ်ကို stonk အကောင့်ထဲသို့ ငွေပြောင်းစေမည်ကို ကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ပါ။
– Ryan Selkis (@twobitidiot) ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၂၂
Crypto တူးဖော်ရေးစတော့များ Riot Blockchain (RIOT) သည် 9.63% ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး Bitfarms (BITF), Hut 8 (HUT), Marathon Digital Holdings (MARA), Core Scientific (CORZ) အားလုံးသည် တစ်ပိုင်းလျှင် 5-7% ကျဆင်းသွားသဖြင့် ထင်ရှားသောပျက်စီးမှုများကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ဆက်စပ်- SBF နှင့် Alameda တို့သည် crypto ပြိုကျမှုကူးစက်ခြင်းကိုတားဆီးရန်ဝင်ရောက်လာသည်။
Crypto စတော့များ၏ ပြိုကျနေသောစျေးနှုန်းများသည် ဝက်ဝံဈေးကွက်နယ်မြေရှိ စံသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် S&P 500 Index နှင့်အတူ 2022 ခုနှစ်တွင် စတော့နှင့် crypto စျေးကွက်များတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကျဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်အစကတည်းက 21.6% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာ 1970 ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Bloomberg ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာ.
ဆက်စပ်- Binance US သည် ပြိုင်ဘက်များ၏ ပူပန်မှုကို ခံစားမိသောကြောင့် BTC ကုန်သွယ်မှုအခကြေးငွေ အခမဲ့ပြုလုပ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် US Federal Reserve ၏ ငွေကြေးမူဝါဒနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို တားဆီးရန် ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် ယေဘူယျအားဖြင့် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြသည်။ အတိုးနှုန်းတက်ခြင်းများကို ဆက်တိုက်မိတ်ဆက်ခြင်း။.
Fed ဥက္ကဋ္ဌ Jerome Powell သည် နှောင်းပိုင်းတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွင် အစိုးရအဖွဲ့ မည်သို့လည်ပတ်မည်ကို သိရှိရန် ၎င်း၏ကတ်များကို ၎င်း၏ရင်ဘတ်အနီးတွင် သိမ်းဆည်းထားသော်လည်း Fed သည် ချေးယူစရိတ်များ ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန် တွန်းအားပေးနေခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကို ထိန်းထားနိုင်ကြောင်း အကြံပြုခဲ့သည်။
ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် အထက်လွှတ်တော် ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်မတီထံ သက်သေခံချက်တွင် ပါဝဲလ်က ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ် John Tester ၏မေးခွန်းကို တုံ့ပြန်ရာတွင် “ဒါဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေသေချာပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထပ်လောင်း “ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းထားတဲ့ ရလဒ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ သေချာပါတယ်။”
admin66408 posts0comments
USTC (ယခင် UST) သို့ ထိပ်တန်း Decentralized Stablecoin အစားထိုးများ
ခရစ်ကတ်များသည် 1 ရက်တွင်… သို့သော် Proshares တိုတောင်းသော Bitcoin ETF ပမာဏသည်2ရက်တွင် 380% တက်လာပါသည်။